Hiiraan:-Ciidamo hor leh oo ka socda dalka Jabuuti ayaa waxaa ay gaareen magaalada Beledwey ne ee xarunta Gobolka Hiiraan iyadoo ciidamadaan ay ku biiri doonaa ciidamo Jabuuyitaan ah oo ka tirsam AMISOM oo horay u joogay Gobolka Hiiraan. Ciidanka Jabuuti ee soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxaa ay noqonayaan Dufacdii Afraad oo ay dowllad Jabuuti u soo dirto dalka Soomaaliya si ay u taageeraan DFS.
Ciidanka dalka Jabuuti oo watad gaadiid dagaal iyo hub kale duwan ayaa waxaa ay xoojiyeen ciidamo Jabuutiyaan iyo Itoobiyaan ah oo iyagu horay u sii joogay Gobolka Hiiraan. Saraakiil ka tirsan Ciidanka DFS ee Gobolka ayaa waxaa ay saxaafada u xaqiiyeen in ciidamo ka socoda dalka Jabuuti ay soo gaareen Gobolka Hiiraan iyagoo ka qayb qaadan doona sugida amaanka xarumaha iyo Saldhiga magaalada.
Magaalada Beledweynayaa waxaa ay ka mid tahay magaalooyinka ay ka tali jireen ciidanka Al-shabaab oo ay ka qab sadeen ciidamo huwan ah oo iskugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan wallow weli ay ka dhacaan weeraro lagu qaado ciidanka DFS iyo xarumahooda.